Facts About Pets – Page5– Petunity
ကြောင်ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ကြောင်မေမေကြီးနဲ့ ဘယ်အချိန်ထိ အတူတူရှိနေသင့်လဲ 😇
ကြောင်ကလေးတွေကို မွေးတဲ့အခါ ရောင်းချတဲ့ တိရစ္ဆာန်ပေါက်စလေးတွေကို မွေးတာပဲလို့ အများက ထင်ကြတယ်။ မွေးတဲ့ နေရာက သာမန်နေရာပဲ ဖြစ်နေပါစေ၊ ကြောင်ကလေးက အရမ်းငယ်လွန်းနေရင် အိမ်အသစ်၊ နေရာအသစ်မှာ မွေးတာကလည်း သူ့အတွက် အန္တရာယ်များလွန်းလှပါတယ်။ ကြောင်မေမေကြီးနဲ့ မကြာသေးခင်ကပဲ ခွဲလာတာဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ အဟာရဓာတ်တွေ ချို့တဲ့သွားနိုင်တာပေါ့။ 😓 ကြောင်ကလေးများနှင့် အသက်အရွယ် 🐈 ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကြောင်မေမေကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ ကြောင်ကလေးတွေကို တစ်လသားအရွယ်မှာ စပြီး နို့မတိုက်တော့ပါဘူး။ ဒါမယ့် အဲအချိန် ကြောင်ကလေးတွေကို မွေးလို့ မရသေးဘူးနော်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နို့ဖြတ်တယ်ဆိုတာက ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်တယ်လေ။ နို့ဖြတ်တဲ့ကာလက နောက်တစ်လလောက် အထိပါ ဆက်ကြာသွားနိုင်သလို ၈လသား၊ ၁၀လသားအရွယ်ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ နို့ပြတ်သွားပါတယ်။ အဲလို အချိန်ရောက်တာနဲ့ ကြောင်ကလေးတွေက သူတို့အတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ ကြောင်စာလေးတွေကို စစားကြပါတယ်။ နို့ဖြတ်တဲ့ ကာလ အကူးအပြောင်းမှာကတည်းက သူတို့လေးတွေကို အဲလို ကြောင်စာမျိုးလေးတွေ နည်းနည်းချင်း စကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်ကလေးတွေကို နေရာသစ်မပို့ခင် အစာခြောက်ကျွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ ကြောင်ကလေးတွေကို မြန်မြန်သားခွဲလိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက် နေရာသစ်တစ်ခုကို အချိန်မကျခင် စောစောပို့လိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စိုးရိမ်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ကြောင်ကလေးတွေ နောက်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာစေဖို့ မွေးမွေးပြီးချင်း အဲလိုအချိန်မျိုးတွေမှာ ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ကိုလိုစထရမ်နဲ့ အဟာရဓာတ်စာတွေက ကြောင်ကလေးတွေရဲ့ အရိုးသန်မာစေဖို့ရယ်၊ မျက်စိကျန်းမာရေးရယ် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက် အထောက်အကူပါပဲ။ ကြောင်ကလေးတွေကို နို့စောစောဖြတ်ရင် နောက်ပိုင်းကျရင် ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။...
အိမ်ကခွေးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါဦးနော် 😥 [Unicode]အိမျကခှေးလေးတှကေို ဂရုစိုကျပါဦးနျော 😥 Credit: AT LEAST 12 dogsaday face being put to sleep because owners fail to update their microchip details.
ကြောင်လေးတွေဟာ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ မိသားစုလိုမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေသူတို့လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ နှိပ်ပေးတာကြုံဖူကြပါသလား? အဲ့လိုလုပ်တာဟာ ကြောင်ပေါက်လေးတွေ အစာတောင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကြောင်လေးက သင့်ကိုအဲလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုသူ့အမေလို့မြင်နေလို့ပါပဲ။❤️😍 [Unicode]ကွောငျလေးတှဟော လူတှကေိုသူတို့ရဲ့ မိသားစုလိုမွငျတတျကွပါတယျ။ ကွောငျလေးတှသေူတို့လကျဖ၀ါးလေးနဲ့ နှိပျပေးတာကွုံဖူကွပါသလား? အဲ့လိုလုပျတာဟာ ကွောငျပေါကျလေးတှေ အစာတောငျးတဲ့နညျးပဲဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကွောငျလေးက သငျ့ကိုအဲလိုလုပျတယျဆိုရငျတော့ သငျ့ကိုသူ့အမလေို့မွငျနလေို့ပါပဲ။ ❤️😍 Petunity
ကျွန်ုပ်မှာ ဌက်တစ်ကောင်ရှိသည် သူသည် ကျေးကျုတ်တစ်ကောင်ဖြစ်သည် 😁 U: ကြှနျုပျမှာ ဌကျတဈကောငျရှိသညျ သူသညျ ကြေးကြုတျတဈကောငျဖွဈသညျ 😁 #Petunity Credit: Abnormal Molting inaParakeet and photos form internet.
Hey Yo! My name is De Dee. I'm 1.6 year old Pomeranian. Well, I'm looking foraPomeranian girl to date me and feel free to contact me through Petunity...
Hear from us, we're PETS.